ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်ရေး တရုတ်က တွန်းအားပေးနေ - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တိုးတက်ရေး တရုတ်က တွန်းအားပေးနေ
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် စွန်းကော်ရှန်းက ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီကို ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ‌‌‌ဒေါ်လာ ၃ သိန်းလှူဒါန်းစဉ်
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့နဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တို့ များများတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ တရုတ်အစိုးရက အစဉ်တစိုက် တွန်းအားပေးလျှက်ရှိကြောင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် စွန်းကော်ရှန်းက ဒီကနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံဆွေနွေးတုန်း မြောက်ပိုင်းမဟာ မိတ်လေးဖွဲ့ကိစ္စကို ဆွေးနွေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အဲဒီလေးဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်၊ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တို့ မကြာခဏတွေ့ဆုံဆွေးနိုင်ရေးကို တရုတ်နိုင်ငံက အစဉ်တစိုက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နေကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာန အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ စွန်းကော်ရှန်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“တရုတ်ဘက်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အထူးပဲ ဂရုစိုက်ပါတယ်။ အလေးထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး မရရှိသေးတဲ့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေ အဖက်ဖက်မှာ နောက်ကျကျန်နေကြောင်း၊ တွင်းထွက်သဘာဝ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိလာရင် အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်”
တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် ငွေလှူဒါန်း တာဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အနာဂတ်မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ် စွန်းကော်ရှန်းက စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း မြန်မာအစိုးရကို လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။
လှူဒါန်းမှုတွေထဲက အစီအစဉ်တစ်ခုကို ဒီကနေ့ ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဗဟိုဌာန NRPC မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ JMC လို့ ခေါ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်ကြီး ရာပြည့်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီးတော့ အဖွဲ့အတွက် ဒေါ်လာ ၃ သိန်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီလိုပေးအပ်လှူဒါန်းတာကိုလည်း အလိုအပ်ဆုံးနေရာမှာ အသုံးပြုဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ တရုတ်က ငွေလှူဒါန်းတာ သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ JMC ကို သီးခြားလှူဒါန်းတာ ပထမနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ငါးသိန်း၊ ဒုတိယနှစ်မှာ ဒေါ်လာ သုံးသိန်းနဲ့ Volvo ကား ၁၀ စီး၊ ဒီနှစ်မှာတော့ ဒေါ်လာ သုံးသိန်း လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ JMC အဖွဲ့ဝင် ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦးအဖွဲ့ (CNF) က ဒေါက်တာရွှေခါး က ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်ခရီးစဉ်မတိုင်ခင် စွန်းကော်ရှန်းဟာ နေပြည်တော်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NRPC တာဝန်ရှိသူတွေကို တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ NRPC အတွက် ဒေါ်လာ လေးသိန်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်အတွက် ဒေါ်လာ သုံးသိန်း ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့လည်း နေပြည်တော်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
စွန်းကော်ရှန်းဟာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့ - KIA ကချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့၊ TNLA တအာင်း လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၊ AA ရက္ခိုင့်တပ်တော်၊ MNDAA ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တို့ကို တရုတ်ပြည်နယ်ထဲ ခေါ်ယူပြီးတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ နေပြည်တော်ကို သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
KIA နဲ့ MNDAA ကလွဲပြီး၊ TNLA နဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ နှစ်ခုဟာ တပ်မတော်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည် နယ်မြောက်ပိုင်းတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ တပ်မတော်ဖက်လည်း ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ဘက်စုံသုံးပြီးတော့ ရခိုင်ဒေသမှာ စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နေတာ အခုဆိုရင် ၁၀ လကျော် ကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင် ဦးရေ ခြောက်သောင်းကျော်အထိရှိလာပြီးတော့၊ ဖမ်းဆီးစစ်မေးမြန်းစဉ် ဒါမှမဟုတ် သေနတ်၊ လက်နက်ကြီးထိလို့ သေဆုံးတဲ့အရပ်သားဦးရေဟာ ရခိုင်ဒေသမှာ ၁၀၀ ကျော်ထိ မြင့်တက်လာပါပြီ။
ဒီအခြေအနေတွေကို လျော့ချနိုင်ဖို့ တပ်မတော်နဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့ ကနဦး နှစ်ဖက်အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး Bilateral Agreement ရေးထိုးနိုင်ရေး ဆွေးနွေးနေကြတာရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းက ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံမှာ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့် အသေးစိတ်သဘောတူညီချက် မရရှိခဲ့ပါဘူး။
KIA နဲ့ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေး တရုတ်ဘက်က ကူညီနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ မိုင်းလားမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အဆိုပြုချက်ကို တင်ပြခဲ့ကြောင်း RFA ကို အတည်ပြု ပြောကြားထားပါတယ်။
စွန်းကော်ရှန်းနဲ့ နေပြည်တော် အစိုးရတာဝန်ရှိသူနဲ့ တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေမှာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် လေးဖွဲ့ကိစ္စကို ဆွေးနွေးခြင်း ရှိ၊ မရှိ ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ ဖော်ပြခြင်းမရှိပါဘူး။
ဒီကနေ့ NRPC မှာ ငွေလှူဒါန်းပြီးနောက် တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ JMC အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ဝဏ္ဍအောင်၊ ပြည့်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုကြီး၊ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNFအဖွဲ့က ဒေါက်တာရွှေခါးတို့နဲ့ NRPC မှာ သီးခြားတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေနဲ့ မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲရပ်တန့်ရေးအတွက် အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ရေးနဲ့ တရုတ်က ဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကို တရုတ်ကိုယ်စားလှယ် စွန်ကော့ရှန်းနဲ့ ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဒေါက်တာရွှေခါးက ပြောပါတယ်။
မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်လေးဖွဲ့နဲ့ အစိုးရ၊ တပ်မတော်တို့ တွေ့ဆုံနိုင်မယ့် အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA က မေးမြန်းတဲ့အခါ သူ့မှာ mandate ပေးအပ်ထားတဲ့ တာဝန်မရှိလို့ မဖြေနိုင်ဘူးလို့ စွန်ကော့ရှန်းနဲ့ တွေ့ဆုံရာ မှာပါတဲ့ တပ်မတော်သား ဗိုလ်မှူးကြီး ဝဏ္ဍအောင်က ပြောပါတယ်။
JMC အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်ကိုလည်း မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တို့ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့၊ ရှိ မရှိ မေးမြန်းတဲ့အခါ ….
သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနက “ကိုဇော်ဌေးကိုသာ မေးကြည့်ပါလို့” ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဇော်ဌေးကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားတာ မရှိပါဘူး။
ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျတိုးတကျရေး တရုတျက တှနျးအားပေးနေ
မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျ စှနျးကျောရှနျးက ပွညျထောငျစုအဆငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီကို ၂၀၁၉ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနကေ့ ‌‌‌ဒျေါလာ ၃ သိနျးလှူဒါနျးစဉျ
မွောကျပိုငျးမဟာမိတျလေးဖှဲ့နဲ့ အစိုးရငွိမျးခမျြးရေး ကိုယျစားလှယျတို့ မြားမြားတှဆေုံ့ ဆှေးနှေးနိုငျဖို့ တရုတျအစိုးရက အစဉျတစိုကျ တှနျးအားပေးလြှကျရှိကွောငျးနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျမှာ တကျတကျကွှကွှ ပါဝငျဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈကွောငျး တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ စှနျးကျောရှနျးက ဒီကနေ့ ပွောဆိုလိုကျပါတယျ။
နိုငျငံတျောတိုငျပငျခံ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ နပွေညျတျောမှာ တှဆေုံ့ဆှနှေေးတုနျး မွောကျပိုငျးမဟာ မိတျလေးဖှဲ့ကိစ်စကို ဆှေးနှေးဖွဈကွောငျးနဲ့ အဲဒီလေးဖှဲ့နဲ့ တပျမတျော၊ အစိုးရ ငွိမျးခမျြးရေး ကိုယျစားလှယျတို့ မကွာခဏတှဆေုံ့ဆှေးနိုငျရေးကို တရုတျနိုငျငံက အစဉျတစိုကျ တှနျးအားပေးဆောငျရှကျနကွေောငျး တရုတျနိုငျငံခွားဝနျကွီးဌာန အာရှရေးရာ အထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စတာ စှနျးကျောရှနျးက RFA ကို ပွောပါတယျ။
“တရုတျဘကျကလညျး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကို အထူးပဲ ဂရုစိုကျပါတယျ။ အလေးထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေး မရရှိသေးတဲ့အတှကျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးတှေ အဖကျဖကျမှာ နောကျကကြနျြနကွေောငျး၊ တှငျးထှကျသဘာဝ သယံဇာတပေါကွှယျဝတဲ့ နိုငျငံဖွဈတဲ့အတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးရရှိလာရငျ အရှိနျအဟုနျနဲ့ တိုးတကျလာမယျလို့ မွငျမိပါတယျ”
တရုတျနိုငျငံဟာ မွနျမာရဲ့ အိမျနီးနားခငျြးနိုငျငံဖွဈတဲ့အတှကျ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျအတှကျ ငှလှေူဒါနျး တာဟာ လုပျသငျ့လုပျထိုကျတဲ့ ကိစ်စဖွဈကွောငျးနဲ့ အနာဂတျမှာလညျး ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျအတှကျ တကျတကျကွှကွှ ပါဝငျဆောငျရှကျသှားမှာဖွဈကွောငျး သူက ဆိုပါတယျ။
မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးမှာ အထောကျအကူဖွဈစဖေို့ တရုတျအထူးကိုယျစားလှယျ စှနျးကျောရှနျးက စုစုပေါငျး အမရေိကနျဒျေါလာ ၁ သနျး မွနျမာအစိုးရကို လှူဒါနျးလိုကျပါတယျ။
လှူဒါနျးမှုတှထေဲက အစီအစဉျတဈခုကို ဒီကနေ့ ရနျကုနျမွို့ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးဗဟိုဌာန NRPC မှာ ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ JMC လို့ ချေါတဲ့ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးဆိုငျရာ ပူးတှဲစောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဒုတိယဗိုလျခြူပျကွီး ရာပွညျ့နဲ့ တှဆေုံ့ပွီးတော့ အဖှဲ့အတှကျ ဒျေါလာ ၃ သိနျး ပေးအပျခဲ့ပါတယျ။
“ဒီလိုပေးအပျလှူဒါနျးတာကိုလညျး အလိုအပျဆုံးနရောမှာ အသုံးပွုဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ”
မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေး အထောကျအကူဖွဈစဖေို့ တရုတျက ငှလှေူဒါနျးတာ သုံးနှဈဆကျတိုကျ ရှိပွီဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ JMC ကို သီးခွားလှူဒါနျးတာ ပထမနှဈမှာ ဒျေါလာ ငါးသိနျး၊ ဒုတိယနှဈမှာ ဒျေါလာ သုံးသိနျးနဲ့ Volvo ကား ၁၀ စီး၊ ဒီနှဈမှာတော့ ဒျေါလာ သုံးသိနျး လှူဒါနျးခဲ့တာဖွဈတယျလို့ JMC အဖှဲ့ဝငျ ခငျြးအမြိုးသား တပျဦးအဖှဲ့ (CNF) က ဒေါကျတာရှခေါး က ပွောပါတယျ။
ရနျကုနျခရီးစဉျမတိုငျခငျ စှနျးကျောရှနျးဟာ နပွေညျတျောမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ NRPC တာဝနျရှိသူတှကေို တှဆေုံ့ခဲ့ပွီးတော့ NRPC အတှကျ ဒျေါလာ လေးသိနျး၊ ငွိမျးခမျြးရေး ကျောမရှငျအတှကျ ဒျေါလာ သုံးသိနျး ပေးအပျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ တပျမတျော ကာကှယျရေးစဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နဲ့လညျး နပွေညျတျောမှာ ဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ။
စှနျးကျောရှနျးဟာ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျလေးဖှဲ့ - KIA ကခငျြးလှတျမွောကျရေးတပျဖှဲ့၊ TNLA တအာငျး လှတျမွောကျရေး တပျမတျော၊ AA ရက်ခိုငျ့တပျတျော၊ MNDAA ကိုးကနျ့လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့ တို့ကို တရုတျပွညျနယျထဲ ချေါယူပွီးတော့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီဆှေးနှေးပှဲအပွီးမှာ နပွေညျတျောကို သှားရောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
KIA နဲ့ MNDAA ကလှဲပွီး၊ TNLA နဲ့ AA တပျဖှဲ့ နှဈခုဟာ တပျမတျောနဲ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးနဲ့ ရခိုငျပွညျ နယျမွောကျပိုငျးတှမှော တိုကျပှဲတှေ ဆကျတိုကျဖွဈပှားနပေါတယျ။ တပျမတျောဖကျလညျး ကွညျး၊ ရေ၊ လေ ဘကျစုံသုံးပွီးတော့ ရခိုငျဒသေမှာ စဈဆငျရေးပွုလုပျနတော အခုဆိုရငျ ၁၀ လကြျော ကွာလာခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ စဈဘေးရှောငျ ဦးရေ ခွောကျသောငျးကြျောအထိရှိလာပွီးတော့၊ ဖမျးဆီးစဈမေးမွနျးစဉျ ဒါမှမဟုတျ သနေတျ၊ လကျနကျကွီးထိလို့ သဆေုံးတဲ့အရပျသားဦးရဟော ရခိုငျဒသေမှာ ၁၀၀ ကြျောထိ မွငျ့တကျလာပါပွီ။
ဒီအခွအေနတှေကေို လြော့ခနြိုငျဖို့ တပျမတျောနဲ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျလေးဖှဲ့ ကနဦး နှဈဖကျအပဈအခတျ ရပျစဲရေး Bilateral Agreement ရေးထိုးနိုငျရေး ဆှေးနှေးနကွေတာရှိပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့လတှတေုနျးက ရှမျးပွညျနယျ ကြိုငျးတုံမှာ အစိုးရငွိမျးခမျြးရေး ကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျတို့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ပမေယျ့ အသေးစိတျသဘောတူညီခကျြ မရရှိခဲ့ပါဘူး။
KIA နဲ့ AA လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တှရေဲ့ ပွောခှငျ့ရ ပုဂ်ဂိုလျတှကေ အစိုးရငွိမျးခမျြးရေး ကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ နောကျတဈကွိမျ ဆှေးနှေးပှဲဖွဈမွောကျရေး တရုတျဘကျက ကူညီနိုငျတဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ မိုငျးလားမှာ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ အဆိုပွုခကျြကို တငျပွခဲ့ကွောငျး RFA ကို အတညျပွု ပွောကွားထားပါတယျ။
စှနျးကျောရှနျးနဲ့ နပွေညျတျော အစိုးရတာဝနျရှိသူနဲ့ တပျမတျောစဈဦးစီးခြုပျတို့ရဲ့ ဆှေးနှေးခကျြတှမှော မွောကျပိုငျးမဟာမိတျ လေးဖှဲ့ကိစ်စကို ဆှေးနှေးခွငျး ရှိ၊ မရှိ ထုတျပွနျခကျြတှမှော ဖျောပွခွငျးမရှိပါဘူး။
ဒီကနေ့ NRPC မှာ ငှလှေူဒါနျးပွီးနောကျ တရုတျအထူးကိုယျစားလှယျဟာ JMC အဖှဲ့ဝငျတှဖွေဈတဲ့ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ရာပွညျ့၊ ဗိုလျမှူးကွီး ဝဏ်ဍအောငျ၊ ပွညျ့သူ့ပါတီဥက်ကဋ်ဌ ဦးကိုကိုကွီး၊ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး CNFအဖှဲ့က ဒေါကျတာရှခေါးတို့နဲ့ NRPC မှာ သီးခွားတှဆေုံ့ ဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိငွိမျးခမျြးရေးအခွအေနနေဲ့ မွောကျပိုငျးမှာဖွဈနတေဲ့ တိုကျပှဲရပျတနျ့ရေးအတှကျ အကောငျ အထညျဖျောနိုငျရေးနဲ့ တရုတျက ဘယျလိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့ အခနျးကဏ်ဍတှကေို တရုတျကိုယျစားလှယျ စှနျကော့ရှနျးနဲ့ ဆှေးနှေးဖွဈခဲ့တယျလို့ ဒေါကျတာရှခေါးက ပွောပါတယျ။
မွောကျပိုငျး မဟာမိတျလေးဖှဲ့နဲ့ အစိုးရ၊ တပျမတျောတို့ တှဆေုံ့နိုငျမယျ့ အခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး RFA က မေးမွနျးတဲ့အခါ သူ့မှာ mandate ပေးအပျထားတဲ့ တာဝနျမရှိလို့ မဖွနေိုငျဘူးလို့ စှနျကော့ရှနျးနဲ့ တှဆေုံ့ရာ မှာပါတဲ့ တပျမတျောသား ဗိုလျမှူးကွီး ဝဏ်ဍအောငျက ပွောပါတယျ။
JMC အဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ရာပွညျ့ကိုလညျး မွောကျပိုငျးမဟာမိတျအဖှဲ့နဲ့ အစိုးရငွိမျးခမျြးရေး ကိုယျစားလှယျတို့ တှဆေုံ့နိုငျဖို့၊ ရှိ မရှိ မေးမွနျးတဲ့အခါ ….
သမ်မတရုံးဝနျကွီးဌာနက “ကိုဇျောဌေးကိုသာ မေးကွညျ့ပါလို့” ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး နိုငျငံတျောသမ်မတရုံး ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ ဦးဇျောဌေးကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ပမေယျ့ ဖုနျးလကျခံဖွကွေားတာ မရှိပါဘူး။